တရုတ်ဟိုတယ်မှန်တံခါးများစုပ်ယူမှု Minibar M-25T ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | AOLGA
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် :: 220V-240V ~ / 50Hz or 110-120V ~ / 60Hz; 60W; ၄-၁၂ လက်မ
အင်္ဂါရပ်၊ အအေးခံနည်းလမ်း Minibar တွင် compressor မရှိ၊ ပန်ကာမရှိ၊ ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းမရှိ၊ Freon မရှိ၊ တုန်ခါမှုမရှိ၊ အသံတိတ်ခြင်း၊ ဆူညံခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
စုပ်ယူမှု Minibar M-25T သည်ဧည့်သည်များအားသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေခြင်း၊ ထုတ်ကုန်တင်ဆက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းတို့တွင်စံနှုန်းသစ်များသတ်မှတ်ပေးသည်။ Mdesafe ၏ဆူညံသံစုပ်ယူမှုနည်းပညာပါ ၀ င်သော 25 l class minibar ရေခဲသေတ္တာသည်လည်ပတ်မှုနှင့်ချွေတာရန်လုံးဝတိတ်ဆိတ်သည်။ ၎င်း၏မှန်တံခါးနှင့် LED အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်တို့သည်မီနီဘားမှသင့်ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ-တံခါးလက်ကိုင်၊ သော့၊ ဘယ်ဘက်ပတ္တာ၊ LED တံခါးဖွင့်ထိန်းချုပ်မှု
အအေးခံနည်းလမ်း - စုပ်ယူနည်းပညာများ၊ အမိုးနီးယားရေအဝိုင်း
၁။ မီနီဘားသည်ဖလိုရင်းမပါဘဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောအာကာသလေထုကိုညစ်ညမ်းစေသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမိုးနီးယားဖြင့်စုပ်ယူနိုင်သောနည်းပညာအသစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
၂။ Minibar သည် compressor မရှိ၊ ပန်ကာမရှိ၊ ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းမရှိ၊ Freon မရှိ၊ တုန်ခါမှုမရှိ၊ အသံတိတ်။ မည်သည့်ဆူညံသံကိုမဆိုတည်ငြိမ်စွာနှင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ ထုတ်ကုန်များသည်အလိုအလျောက် defrost လုပ်ပြီး static-cooling refrigerators များနှင့်ဆိုင်သည်။
၆။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသောလည်ပတ်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် ၅ နှစ်အာမခံ။
၂။ အရောင် (အနက်၊ အဖြူ၊ etc)
3. ခိုင်ခံ့သောတံခါးသို့မဟုတ် Glass တံခါး
၅။ ပါဝါပလပ်အမျိုးအစား၊ ဥပမာ၊ စပိန်အမျိုးအစား၊ နယူးဇီလန်အမျိုးအစား၊ အမေရိကန်အမျိုးအစား၊ ဥရောပအမျိုးအစားစသည်
7.AC သို့မဟုတ် DC
•ဟိုတယ်ဧည့်ခန်း၊ ရုံး၊ ဆေးရုံ၊ အိမ်စသည်တို့
1. ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းအား ၀ န်မခံဘဲ ၁ နာရီခန့်အလုပ်လုပ်ပါ၊ ထို့နောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ကုန်ကိုသုံးသောအခါအစားအစာများကိုထည့်ပါ။
၂။ ထုတ်ကုန်သည်အလျားလိုက်မတ်တပ်ရပ်။ မစောင်းနိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အအေးဓာတ်ကိုအားနည်းစေလိမ့်မယ်။
၃။ အပူချိန်ထိန်းညှိကိရိယာတွင်လုံးဝ ၅ ရာထူးရှိပါသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ရာထူး ၅ သည်အအေးဆုံးဖြစ်သည်။
၄။ အစားအသောက်များကိုအစိုးရအဖွဲ့ထဲသို့တစ်ခါတည်းအများကြီးမထည့်ပါနှင့်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပါ။
၆။ စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက်တံခါးဖွင့်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်တံခါးဖွင့်သည့်အခါတိုင်းမြန်မြန်လုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုးစားပါ။
၇။ အသုံးမပြုဘဲနေလျှင်၊ တုံးအတွင်းပိုင်းကိုသန့်ရှင်းရန်နူးညံ့စိုစွတ်သောအဝတ်ကိုသုံးပါ။ cube အတွင်းလေတိုက်စားခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လေထဲသို့ဖြန့်ပါ။
8. LED မီး၊ 3.6V/1W
စုပ်ယူမှု Mini bar
စုပ်ယူမှုစနစ် (Cooling System)
၄-၁၂ ℃ （အသက် (၂၅) ဝန်းကျင်
ယခင်: ဟိုတယ်စုပ်ယူမှု Minibar M-25A
နောက်တစ်ခု: ဟိုတယ်စုပ်ယူမှု Minibar M-30A
Lock ပါသော Minibar
ဟိုတယ်အံဆွဲ Minibar M ...
ဟိုတယ်နှင့်အိမ်သုံး Abs ...